Namoaka Expo Fizahan-tany momba ny fizahan-tany Voahangy faha-6 an'i Uganda
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia Oganda » Namoaka Expo Fizahan-tany momba ny fizahan-tany Voahangy faha-6 an'i Uganda
Ny fampiroboroboana ny fizahan-tany any Pearl of Africa (POATE 2021) dia fampirantiana fizahan-tany virtoaly voalohany indrindra any Oganda izay mifantoka amin'ny fanarenana, fanarenana, fampifandraisana indray ary famerenana indray ny sehatry ny fizahantany Ogandey.
POATE dia fampirantiana fizahan-tany karakarain'ny Birao fizahan-tany Oganda isan-taona.
Ny fanombohana ny POATE 2021 natao ny 23-25 ​​aprily 2021 dia eo ambanin'ny lohahevitra hoe: "Famerenana ny fizahan-tany ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena isam-paritra."
Ny fanapaha-kevitra handeha virtoaly dia tsy nitaona ny fanamby tsy manam-paharoa napetraky ny COVID-19, fa noho ny fanirian'i UTB hampiasa ny Internet hitondra olona betsaka araka izay tratra.
Tao anatin'ny fanantenana sy taratry ny fanantenana amin'ny famelomana indray ny sehatry ny fizahan-tany, ny birao fizahan-tany Uganda (UTB) dia nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny fampirantiana ny fizahan-tany faha-6 an'ny Pearl of Africa (POATE 2021) tamin'ny 10 martsa 2021. Io no fampirantiana fizahan-tany virtoaly voalohany indrindra ho an'i Oganda. nohamafisin'i Sandra Natukunda, tompon'andraikitra ambony amin'ny fifandraisana amin'ny olona any UTB.
POATE dia fampirantiana fizahan-tany karakarain'ny Birao fizahan-tany Oganda isan-taona. Izy io dia mampivondrona ireo mpandraharaha fizahan-tany, isam-paritra ary iraisampirenena, mpiasan'ny fizahan-tany, maso ivoho isan-karazany ary mpilalao isan-karazany amin'ny varotra fizahan-tany mba hanamora ny asa fizahan-tany.
Ny fanombohana ny POATE 2021, izay hatao ny 23-25 ​​aprily 2021, mitondra ny lohateny hoe: "Famerenana indray ny fizahan-tany ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena isam-paritra" dia tonga eo amin'ny fitomboan'ny fitomboan'ny tranga COVID-19, toy ny fatra 350 tapitrisa amin'ny Vaksinin'ny COVID-19 no entina manerantany, hoy ny World Health Organization.
Ny CEO CEO UTB Lilly Ajarova dia nilaza fa ny fanapaha-kevitra handeha virtoaly dia tsy nampahafantarina sy nitaoman'ireo fanamby ara-batana sy ara-logistika tokana nateraky ny COVID-19 sy ireo fetra mifandraika amin'izany, fa io koa dia noho ny fanirian'i UTB hampiasa ny Internet hitondra ireo mpandray anjara marobe araka izay tratra.
"Nanangana sehatra fihaonana virtoaly manokana izahay izay hanamora ny fivorian'ny tsirairay, ny seha-pifandraisana haingam-pandeha virtoaly, ary koa ny seha-pivoriana ho an'ny mpilalao fizahan-tany eto an-toerana, isam-paritra ary iraisam-pirenena," hoy izy.
Ny sehatra virtoaly dia manana fahaiza-manao miavaka toy ny:
Lisitry ny lahatahiry: Ity dia mitovy amin'ny fampisehoana an-tserasera izay ahafahan'ireo mpampiranty mampiseho ny vokatra sy serivisin'izy ireo amin'ny endrika haino aman-jery isan-karazany ao anatin'izany ny horonan-tsary, rohy tranonkala ary e-brochure. Ho an'ny fikarohana mora sy ny fahazoana mamatsy vola, ny exhibitors dia afaka mitanisa ireo vokatra sy sokajy serivisiny.
Fihaonana 1-amin'ny-1: Ny fivoriana hiasa ao anaty lampihazo dia ho an'ny mpividy, haino aman-jery ary fampiratiana ihany ary hamela ireo mpandray anjara hifandray amin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny matihanina amin'ny varotra dia manana fahefana hividy mivantana. Ireo mpandray anjara dia afaka mamorona ny mombamomba ny mpanatrika, manampy vokatra sy faritra tian'izy ireo hividy. Hanamora ny fampirantiana sy ny mpandray anjara hafa izany mba hahita haingana sy hifanaraka amin'ireo fifandraisana mifanaraka amin'ny filan'ny orinasa.
Taranaka mitarika: Ny sehatra virtoaly dia ahafahan'ny mpandray anjara mandahatra fotoana lavitra ny fivoriana video sy telopolo minitra miaraka amin'ireo matihanina amin'ny indostria. Ny rafitra dia mamela ihany koa fampandehanan-draharaha marobe, toy ny fifanakalozana karatra fandraharahana, famolavolana drafitra fifanarahana sns.
Sesi-kevitry ny votoatin'ny safidy: Ireo mpandray anjara dia hanana seho mivantana, adihevitra, ary seha-pifanakalozan-kevitra avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny indostria hisafidianana. Lohahevitra maro samihafa avy amin'ny manam-pahaizana amin'ny sehatra lehibe toy ny hotely, fiaramanidina, faharetana, faharetana ary fanarenana amin'ny tontolo aorian'ny COVID-19 no nilahatra.
Mpandray anjara ho an'ny POATE 2021 dia hojerena amin'ny alàlan'ny masontsivana izay novolavolain'ny komity mpikarakara nasionaly mba hahazoana antoka fa manana kalitao tsara izy ireo hanehoana ny tolotra Destination Oganda.
Ny mpividy sy ny fampirantiana fampiantranoana dia hividianana tsena ifotony sy loharano misy ao amin'ny Faritra Afrika Atsinanana (Kenya, Tanzania, Rwanda), Afrika ambiny (Egypt, Nigeria, Africa South), ary ny tsena iraisam-pirenena (Amerika Avaratra, UK , sy Irlandy, ary koa firenena miteny Alemanina, Japon, fanjakana Golfa, ary Sina miampy tsena vaovao - France, Belzika ary Netherlands).
Mandritra ny andro ho avy, ny UTB dia handray anjara bebe kokoa amin'ny indostria amin'ny fomba tsara hanararaotana ireo fotoana marobe natolotry ny POATE 2021.
“Ny fananganana ny fahombiazan'ny POATE 2020 izay nanoratanay ny fitomboan'ny 138% amin'ny fampirantiana, nanomboka tamin'ny 63 ny fampirantiana tamin'ny taona 2018 ka hatramin'ny 150 ny exhibitors tamin'ny taona 2020, ary ny fampiasantsika ny herin'ny Internet, amin'ity indray mitoraka ity dia antenaina hisarika fampirantiana 200 mahery izahay, ”hoy hatrany izy.
Rehefa miomana amin'ny famerenana tsikelikely ny sehatry ny fizahan-tany rezionaly isika dia mino fa ny POATE 2021 dia handray anjara amin'ireto:
Fampitomboana ny fahatsiarovan-tena ho amin'ny tanjona: ny POATE 2021 dia hahafahan'ny mpitsidika sy ny mpampiranty varotra mampiseho sy mahazo ny vaovao farany momba ny vokatra fizahan-tany misy avy any Oganda sy ny sisa eran'izao tontolo izao.
Fampitomboana fahalalana: Ny expo dia hahafahan'ny mpamatsy vokatra fizahantany hitsapana ny fanekena ireo vokatra ireo eo amin'ny tsena Ogandey aorian'ny COVID-19.
Fanatsarana ny fizarana serivisy fizahan-tany: ny POATE 2021 dia hahafahan'ny mpizara fizaram-bokin'ny fizahan-tany hifanerasera amin'ireo mpamatsy sy mpaninjara ao anaty rojom-bidy hananganana fifandraisana ilaina amin'ny fitohizan'ny orinasa.
- Fifanarahana orinasa vaovao sy fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina manandanja: Mandritra ny POATE 2021, ireo mpamatsy serivisy sy vokatra mifandray amin'ny fizahantany dia hikatona sy hanao sonia ny fifampiraharahana amin'ny alàlan'ny famandrihana fitsangatsanganana eny an-toerana. Tombanana ROI amin'ny UGX 12.2 miliara no andrasana amin'ny taona ara-bola manaraka.
- Fananganana fifandraisana; POATE 2021 dia hanolotra ny fotoana ahafahan'ny tambajotra an-tserasera ataon'ireo mpandray anjara lehibe amin'ny sehatry ny fizahantany; hanome sehatra ilaina ihany koa ho an'ireo mpandray anjara hizaha ny fifanakalozana sy ny hetsika fiaraha-miasa.
Raha niresaka tamin'ny fanombohana, Hon. Daudi Migereko, Filohan'ny Birao faha-4 an'ny talen'ny UTB, dia naneho fahatokisan-tena tamin'ny fotoana POATE 2021: “Amin'ny ankapobeny, afaka milaza isika fa tsy misy fotoana tsara kokoa handefasana hafatra fanantenana ho an'ny sehatry ny fizahantany; hafatra iray mifantoka amin'ny fanarenana, fanarenana, fampifandraisana indray ary famerenana indray ny sehatry ny fizahan-tany Ogandey. ”
Hon. Godfrey Ssuubi Kiwanda, ny minisitry ny fizahan-tany, ny bibidia ary ny fahagola ao amin'ny Kabinetra Ogandey, dia nanasongadina ny maha-zava-dehibe ny sehatra tsy miankina amin'ny fanombohana ny indostrian'ny fizahantany any Oganda:
“Ao an-toerana, fantatray fa ny sehatra tsy miankina dia niverina tamin'ny tongony tamin'ny fomba mahazatra ankehitriny, ary fantatray fa tsy mora izany ary tsy ho mora dieny izao; Fa eny, misy hazavana any amin'ny faran'ny tionelina ary amin'ny maha Governemanta anay, dia nanao ny entimodinay ihany koa izahay tamin'ny alàlan'ny fakana stock, nitady loharanom-bola, ary ny paikady miverina miverina amin'ny fanohanana ny UTB amin'ny ezaka fanarenana azy. "
Raha ny tatitry ny Bank of Uganda Monetary Policy Report ho an'ny volana febroary, ny toekarena Ogandey dia vinavinaina hitombo eo anelanelan'ny 3% - 3.5% amin'ity taona ara-bola ity.
Manantena i UTB fa ny vaksininy manerantany dia hanosika ny famerenana ireo mpizahatany iraisam-pirenena hiditra ao amin'ny firenena. Raha ny filazan'ny World Tourism Organisation (UNWTO) dia miverina amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahan-tany, amin'ny taona 2021 dia antenaina ho tsara kokoa noho ny 2020 ary andrasana ny fihemorana amin'ny 2022.
Ny amerikana dia manidina isa marobe mankany Hawaii Resorts sy morontsiraka indray
Ny Viking dia mamerina amin'ny laoniny ny asa voafetra amin'ny dia an-dranomasina UK